आगे श्रीमानकाे जो विचार - व्यंग्य - प्रकाशितः फाल्गुन १३, २०७४ - नेपाल
उहिले–उहिले श्रीमतीहरूले श्रीमान्को नाम काढ्नु हुँदैन भनिन्थ्यो । अचेल श्रीमान्को जन्ममितिबारे प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । तर, यो कुनै आउरेबाउरे श्रीमतीका चाउरेपचाउरे श्रीमान्को जन्ममितिको कुरा होइन, सर्वोच्च श्रीमान्को शुभ–जन्ममितिको कुरा हो । केही अटेरी मानिस र केही उद्दण्ड सञ्चारमाध्यमहरूले शीर्षस्थ न्यायमूर्तिको जन्ममितिबारे अनेक प्रश्न तेस्र्याइरहँदा हामी उहाँका भक्तजनहरू पनि उहाँजस्तै आक्रोशित र उत्तेजित भएका छौँ ।
जाबो दुई–चारवटा जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा अनर्गल कुरा उठाउनेहरूलाई श्रीमान्ले ‘नीच ढङ्गले भ्रम फिँजाउने तत्त्व’को संज्ञा दिइसक्नुुभएको छ । हो नि त ! उहिल्यै केटाकेटीमा, युवाकालमा, स्कुलमा, गोठालामा, ससुरालीमा, हनिमुनमा अर्थात् सर्वोच्च पदमा पुग्नुभन्दा अगाडि भए/गरेका कुरा कोट्याएर यी तत्त्वहरूले नीच ढंगले भ्रम फिँजाइरहेका छन् । यसरी भित्रभित्र पसेर उधिन्न थाल्ने हो भने यो दुनियाँमा सद्दे मान्छे भेट्टाउन सम्भव छैन । यिनीहरूले श्रीमान्को प्रगति र ख्याति खप्न नसकेर बदनाम गरेका हुन् । यिनीहरूलाई त्यसै छाड्नु हुँदैन श्रीमान् !
यिनीहरूको खेती हेर्नूस् । एउटाले श्रीमान्का दुईवटा जन्ममिति फेला पारेर समाचार छाप्यो । अर्कोले तीनवटा भेट्टाएँ भन्दै अर्को समाचार छाप्यो । ती समाचारहरूले हिट खाएको देखेर यिनीहरू हजुरको जन्मकुण्डली मात्रै होइन, सालनालकै उत्खनन गर्न खोज्दैछन् । हुँदाहुँदा भर्खरै अर्को एउटा पत्रिकाले पाँचौँ नम्बरको जन्ममिति भएको कुण्डली भेट्टाएर बिस्कुन लगायो । यिनीहरूले हजुरको जन्मकुण्डली खोज्न मात्रै जागिर खाएका हुन् त श्रीमान् ?
त्यस्ता दुष्टहरूमध्ये एक जनालाई श्रीमान्ज्यूले ‘मार्दिन्छु’ भन्नुभयो भन्ने सुनियो । त्यो त ठीकै गर्नुभयो तर त्यो उद्दण्ड डाक्टरलाई चाहिँ ठेगान लगाउन सक्नुभएन है, हजुरले पनि । त्यसले श्रीमान्को अड्डामै आएर श्रीमान्का नाकैमा औँलो पुर्‍याउँदा पनि त्यसका पाता फर्काउन सक्नुभएन । यसमा चाहिँ हामी साह्रै दु:खी छौँ । त्यसबाहेक हामी श्रीमान्बाट सदा प्रसन्न छौँ ।
हजुर नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा हक्की, निडर, नझुक्ने, नलजाउने, विरोधीहरूको सातो उडाउन सक्ने, वादविवाद प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट तथा सदा हँसमुख व्यक्तित्वका धनी इतिहासपुरुष नै हुनुहुन्छ । दर्जनौँ अभियोग र आक्षेपहरूलाई पैतालामुनि दबाउँदै अघि बढ्न सक्ने यस्ता न्यायमूर्ति नेपालको इतिहासमा न पहिले थिए, न त अब हुनेछन् । हामीले थाहा पाएसम्म हजुर बालकैदेखि हरेक कुरामा सक्रिय, चञ्चले र नयाँनयाँ सिर्जना गर्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ । हजुर पटक–पटक जन्मिनुहुन्छ । ००९ सालमा, ०१० सालमा, ०११ सालमा । एउटै नरचोलामा फरक–फरक समयमा यसरी पटक–पटक जन्मिने दोस्रो व्यक्तित्व आजसम्म हामीले देखेका छैनौँ ।
नेता, मन्त्री, व्यापारी, वकिल, झगडियाहरू सबैसँग उपयुक्त सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने समताभाव छ हजुरमा । हजुरजस्ता जाँगरिला न्यायमूर्ति पाएर यो देश र हामी नागरिक धन्य भएका छौँ । यस्ता महान् न्यायमूर्तिको मानमर्दन गर्ने नीच तत्त्वहरूलाई न्यायालयकै अपहेलना गरेको कसुरमा कारबाही गर्नैपर्छ । यिनीहरूलाई छाडा छोडिएमा पदावधि नसकिँदै यिनीहरूले हजुरको जागिर खाइदिन बेर लगाउँदैनन् श्रीमान् । यिनीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि हजुरलाई थप समय चाहिन्छ भने श्रीमान्को ०११ सालको जन्ममितिवाला कुण्डली पेस गरेर अझै एक वर्ष यो पदमा कायम रहन प्रयास किन नगर्ने ! आगे श्रीमान्को जो विचार ।